WhatsApp chọrọ izere SPAM na ikpo okwu izi ozi ya Akụkọ akụrụngwa
WhatsApp chọrọ izere SPAM na ikpo okwu izi ozi ya
N'ezie, ọtụtụ n'ime gị anatala kemgbe ị na-eji WhatsApp ọkachasị na afọ abụọ gara aga, ụfọdụ agbụ nke a gbara gị ume ka ị kesaa ozi Site na kọntaktị gị, iji gbochie WhatsApp ịkwụsị ịrụ ọrụ, ịghọ ngwa ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ jiri ozi ndị na-amanye anyị ka anyị pịa ma kwụọ ụgwọ iji gaa n'ihu na-eji usoro izipu ozi.
The WhatsApp ozi n'elu ikpo okwu aghọwo ụzọ bụ nkwukọrịta maka ọtụtụ ndị ọrụ, ụfọdụ n'ime ha na-adabere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị na ya na oge ọ bụla ọrụ dara, ha na-eti mkpu n'eluigwe. Ndị Spammers raara onwe ha nye izipu ụdị ozi ndị a, na-eji ohere nke ụfọdụ ndị ọrụ eme ka a kwụsị iji ya ma kesaa ozi ọ bụla nke ụdị a n'etiti kọntaktị ha.
Emechaa ka ọ dị na mbụ, ihe na-abụkarị ihe a na-ahụkarị na WhatsApp, ọ dị ka ha mechara ghọta na ụdị ozi ndị a naanị ihe ha ga - enweta bụ na ụfọdụ enweghị ntụkwasị obi dabara n'ọnyà na kwụọ ụgwọ nke atọ iji gaa n'ihu na-eji ikpo okwu, inye ihe atụ nke ego nwere ihe jikọrọ ya na ya. WhatsApp enweela ọtụtụ nzacha na na tiori, na-ahụ maka nzacha ozi ndị ezigara n'ọtụtụ oge, ihe nzacha na-ahụ maka iwepu ụdị ozi a ka ha wee kwụsị ịgbasa na netwọkụ. Mana ọ dị ka o zughi oke na ọ chọrọ ka ha laa ngwa ngwa o kwere mee.
Ugbu a, WhatsApp na-enye anyị ohere ibute ozi iri atọ ọnụ na 30 nke kọntaktị anyị. Ọ bụrụ na anyị karịrị ọnụ ọgụgụ ahụ, ngwa ahụ na-adọ anyị aka na ntị na anyị ekerịtala ozi ahụ ọtụtụ oge, mana anaghị enye anyị mmachi na nke a. Ntọala izipu ozi, cheta na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkekọrịta ozi n'ụzọ buru ibu, anyị na-eji ndepụta nkesa, ndepụta nkesa nke ndị spamm na-enweghị ohere, ebe ọ bụ na ha na-anata ozi zitere site n'okporo ụzọ a, ndị nwere ndị zitere ha. echekwara nọmba ekwentị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » WhatsApp chọrọ izere SPAM na ikpo okwu izi ozi ya
Kwee ekele maka ibe QLC, echiche Intel gbanwere draịva SSD
Nwuo na Apple maka ịrụ ọrụ batrị. Companylọ ọrụ ahụ na-agbazi site na ịgbakwunye bọtịnụ iji bulie arụmọrụ